De Bruyne oo shaaca ka qaaday xulka uu u arko inuu ku guuleysan karo Koobka Kooxaha Yurub ee Euro 2020 – Gool FM
(Yurub) 05 Abriil 2019. Xidiga kooxda Manchester City ee Kevin De Bruyne ayaa xaqiijiyay in kasoo muuqashada jiilka cusub ee da’ayarta ah ay ka dhigi doonto xulka qaranka England musharaxa ugu xoogan ee ku guuleysan kara koobka Euro 2020.
Kevin De Bruyne ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga hadlay arintan.
“Waxaan u sheegayay dhalinyarada Ingariiska ah ee kooxda Manchester City isbuucii hore, inay tahay inay ku guuleystaan Koobka Kooxaha Yurub, waxaan u maleynayaa inay kala siman yihiin kuwa ugu cad cad xulka France”.
“Ma ogi inay ku guuleysan karaan, sababtoo ah hal koox uun kaliya ayaa qaadi doonta koobkan, laakiin waxay haystaan fursad ay ku qabtaan shaqo wanaagsan 10-ka sano ee soo socda”.
“Waxaan soo qaatay xili ciyaareed xun, kadib markii aan kasoo kabtay 4 dhaawac, waxaan isku dayi doonaa inaan dib u helo qaab ciyaareedkeyga ugu fiican, islamarkaana aan gacan ka geysto guulaha kooxda”.
"Qofkasta oo Madoow ah waa inuu iska difaaco Leonardo Bonucci iyo dadka la midka ah.".- Thuram